U Nyan Lin Htun | Dedaa.com.mm
U Nyan Lin Htun
Nyan Lynn Htun
Duration:1 hour, 22 minutes and2seconds
Basic of Stock Share
Companies on or off YSX
ဒီတစ်ခါမှာတော့ ငွေကြေးဈေးကွက် (Capital Market) မှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအတွက် စတော့ရှယ်ယာ (Stock Share) တွေ အကြောင်းကို အခုဒီ သုံး မိနစ် (3Minutes )စာ Video လေးအတွင်းမှာ ဆရာ ဦးဥာဏ်လင်းထွန်း မှ Dedaa မှတစ်ဆင့် အခုလို ပြောကြားပေးထားပါတယ် ။
ငွေကြေးဈေးကွက် လို့ ခေါ်တဲ့ Capital Market မှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ အခါမှာ စဉ်းစားရမယ့်အချက်တွေ နဲ့ Debt Finance ဆိုတာ ဘာလဲ ???? Equity Finance ဆိုတာ ဘာလဲ ???? စတာတွေကို အခုဒီ သုံးမိနစ် (3Minutes ) စာ Video အတွင်းမှာ ဆရာ ဦးဥာဏ်လင်းထွန်း မှ Dedaa မှတစ်ဆင့် အခုလို ပြောကြားပေးထားပါတယ် ။